Apple Music waa music geeyo adeega ugu dambeeyay taas oo la jaan qaada macruufka qalab in harsan version 8.4 iyo ka dib iyo version Lugood ee 12.2 iyo ka dib. Adeegga waxaa sidoo kale la filayaa in ay u Android iyo Apple TV laga heli karaa ugu dhaqsaha badan. Waxaad u abuuri kartaa playlist gaar ah iyo sidoo kale dhagaysan music aad jeceshahay iyo xataa in ay ku xirmaan xiddigaha music jeceshahay. Apple Music qulquli lahayd music by default taasoo la micno ah heesaha oo si toos ah u imaan lahaa qalabka aad soo qaato oo meel ay kaydinta. Duuban heeso dhex Apple Music aad bixisaa xarun kale - dhagaysto offline music; si kastaba ha ahaatee in uu oggolaan in app ay u isticmaalaan qaar ka mid ah boos ka heli karo kaydinta in qalab aad. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa ama iibsado iyada oo dukaan Lugood iyo dhan kuwan raadkaygay kuwaas oo lahaa toos ah lagu kaydiyaa iCloud.
Qeybta 1: Waa maxay Xadidida Kaydinta Music Apple
Qeybta 2: Intee in le'eg oo Kaydinta Space Apple Music waa la isticmaalayo?
Qeybta 3: Download hoorto music si xor ah u PC / Mac ama qalabka la TunesGo
Ahaanshaha cajiib ah oo ku saabsan kaydinta laga heli karo iPhone waa arrin dabiici ah oo dheeraad ah si, marka aad soo bixi heeso badan ka Apple ama Lugood Music Store. Macaamiishan gali kartaa ku dhawaad ​​25,000 oo heeso iyo tiro taas la kordhin doonaa 100,000 songs olole ee macruufka 9 ka dib dhamaadka sanadka. Goobta qaaday ay ku raad iyo heeso aad u soo dejisan Apple Music waa isku mid sida kuwa ka Lugood Store ama wax kasta oo ilo kale. Haddii aad isticmaalayso Lugood kulanka, markaas waxaad ku hayn kartaa music oo dhan ee iCloud Music Library iyo in ka mid ah heesaha oo aad dooxeen ka CD-yada iyo weliba. Waxaad lahaa helitaanka aad music ka qalabka oo dhan oo wuxuu ku raaxaysan kartaa dhagaysto aad song jecel meel kasta.
1) Sida loo View Apple Music Kaydinta Space -
Waxaa muhiim ah in aad in la ogaado in aad u baahan tahay in la isticmaalaya ugu yaraan macruufka 8.4 si ay u helaan Apple Music. Hoos siiyo waa tallaabooyinka si loo hubiyo meel lagu keydiyo loo isticmaalo Apple Music
1. Tag goobaha iyo furan goob menu
2. Hadda ka jaftaa on ikhtiyaarka Guud
3. Tubada on doorasho Isticmaalka ah
4. Tubada on 'Maamul Kaydinta' joogo badhanka liiska doorashada Kaydinta
5. Hadda aad u baahan tahay si loo helo doorasho Music ah oo halkaas waxaad arki doontaa xaq u tiro fursadda in a iyo tan muujinaysaa meel lagu kaydiyo ee la isticmaalo oo ay ku app Apple Music
6. Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah, waxaad u baahan tahay inay hesho badhanka Music ah oo aad ka heli lahaa tirakoobka shakhsiga ah ee qof walba oo song in qalab aad. Waxaa suurto gal ah in ay tirtirto maktabadda music oo dhan ama wax heeso gaar ah ka qaybtan menu. Waxaa jira xaadirka ah button Edit rukun sare ee shaashadda si ay xaq. Tubada in ka dibna aad tirtiri kartaa heeso u gaar ah oo ay siyoodba wareegga cas oo jooga xagga bidixda ka ah heesaha.
2) Sida loo kala cadeeyo khasnado Music app cusub ee?
Haddii aad shaqeysiin iCloud in qalab aad, ka dibna aad kala cadeeyo karo khasnado app ee sida soo socota:
Tag goobaha hormariyo badhanka Music ah. Halkan ka jaftaa on Warega off button u iCloud Music Library
Sida aad u furan in aad Music app, waxaad arki doontaa maktabadda bilaabin in ay nadiifiso
Mar ay tagaan goobaha loo hormariyo badhanka Music iyo shid iCloud Music Library
Marka aad furto app music ah, maktabadda la dhisi lahaa.
Tani waa sida aad ka fiirin kartaa qadarka bannaan in loo isticmaalay by Apple Music. Waxa kale oo aad maamuli kartaa Apple Music Kaydinta isticmaalka app ee sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah.
> Resource > Music > Apple Music Kaydinta